UF-300 Chaiyo-nguva PCR Sisitimu
Kurumidza, Yakakwenenzverwa uye Inonzwisisika Platform yePoint-ye-yekutarisira Molecular Diagnostics
◦ Patent chip based based reaction inopa kukurumidza kuburitsa- "Makyuru makumi mana muMaminetsi makumi maviri".
Uit Intuitive mushandisi interface (LCD yekubata pani) inoita kuti bvunzo ive nyore uye nyore.
◦ Tsoka diki dzepuratifomu dzinoita kuti ive yakanakira poindi-ye-yekutarisira kuyedza kunyorera
Operation DC inotyairwa mashandiro ane yakaderera simba kunwa (Bhatiri oparesheni inogoneka.)
◦ Yakagadziridzwa tembiricha kunyatso uye kuenzana kusangana nezvinodiwa mukuongorora.
◦ Iyo modhi ine mbiri yekuona nzira (FAM / ROX) inowanikwa.
Inovandudza chikuva chekuita yako PCR diagnostics nekukurumidza
Yakareba kutendeuka nguva yePCR bvunzo uye yakakura uye inorema chishandiso ndidzo dzakakoshesa kudzikamisa kupararira kweiyi yakanyatsojeka uye inonzwisisika nzira yekutsvaga mune poindi-ye-yekuchengetedza maitiro ekuongorora. Genesystem yakagadzira microfluidic chip yakavakirwa PCR nzira inosanganisirwa necompact uye yakaomesesa Hardware michina iyo inoderedza zvakanyanya TAT yePCR kuyedza pasi pasi pemaminitsi makumi maviri. GENECHECKER® mapuratifomu akagamuchira yepamutemo polymer chip (Rapi: chip ™) iyo inogonesa kunyange nekukurumidza
kupisa kurapwa kwemasampuli mairi kupfuura nyaya yekushandisa PCR machubhu pane zvakajairwa PCR zviridzwa. Iyo yekupisa yekuchovha bhasikoro mashandiro eGENECHECKER® anowana 8 ° C / sec kukwirisa chiyero cheese kupisa uye kutonhora. Iyo yakasarudzika bvunzo fomati uye mamiriro-e-iyo-hunyanzvi hwetekinoroji yeGENECHECKER® chikuva inoita iyo PCR bvunzo nekukurumidza kupfuura nakare kose.
Yakabatanidzwa yekubata pani mushandisi interface ye intuitive kutonga
GENECHECKER® UF-300 chaiyo-nguva PCR system ine inobata pani yekumusoro kumusoro kuitira kuti vashandisi vagone kuisa intuitively kuseta ma parameter uye nekukurumidza kumhanyisa bvunzo. Iyi 8 inch yakakura pani yakagadzirwa neTFT kuratidza kuti ipe yakajeka maonero uye nekukurumidza mhinduro.
Yakagadziriswa chiridzwa mashandiro eakaomesesa maitiro ekuongorora
Ipo ichichengetedza kuita kwayo kwakasarudzika kwemaitiro ekukurumidza-kutsanya, GENECHECKER® UF-300 chaiyo-nguva PCR system inopa yakagadziriswa tembiricha kunyatso uye kufanana kuenzanisa neshanduro dzekare dzeGENECHECKER® masisitimu. Kuwedzera kune iyo modhi ine imwechete yekuona chiteshi (FAM), iyo ine mbiri yekuona chiteshi (FAM / ROX) inowanikwawo kune maapplication anoda kumhanyisa zvemukati kutonga.
Uchishandisa Mechanism Kunyatso kudzora kwepeltier element
Kupisa Kwechokwadi ± 0.2 ° C
Kupisa Kufanana ± 0.2 ° C (tsime kusvika tsime)
Kupisa Kugadzikana 8 ° C / wechipiri
Ramping Rate 8 ° C / wechipiri
Range Tembiricha Marongero 1 ~ 99 ° C (0.1 ° C resolution)
Semuenzaniso Fomati Polymer yakavakirwa 3-mativi microfluidic chip
Nhamba yeSample paRun 10
Reaction Vhoriyamu 10μl
Nzira Yekuziva Kuyerwa kwechiratidzo che fluorescence uchishandisa CMOS module
Ratidza uye Yekushandisa Yekushandisa 7 padiki TFT kuratidza capacitive kubatwa Panel
Rudzi rwekunakidzwa Kupenya kwepamusoro LED
Kutsvaga Chiteshi FAM (imwechete chiteshi vhezheni), FAM / ROX (mbiri chiteshi vhezheni)
Simba AC 110-230V (50-60Hz) Input / DC 12V Kubuda
Mvura 85 W
Zvibatanidza USB Type B (2 madoko)
Divi 218 (w) x 200 (d) x 142 (h) mm
Kurema 3.3 kg
Cat. Nhamba Tsananguro
1199100600 1199100601 9699100100 9699100101 9699100102 9900300701 GENECHECKER® UF-300 Chaiyo-nguva PCR Sisitimu ine Imwe Yekucherechedza Chiteshi GENECHECKER® UF-300 Chaiyo-yenguva PCR Sisitimu ine Dual Detection Channel Rapi: chip ™ 10-zvakanaka PCR Chip (S-Pack), Standard Rongedza (48 pcs / PK) Rapi: chip ™ 10-zvakanaka PCR Chip (M-Pack), Pakati Pakati - 8 PK ye Standard Pack Rapi: chip ™ 10-zvakanaka PCR Chip (L-Pack), Yakakura Pack - 16 PK ye Standard Pack Inesarudzo Simba Cable yeMota Fodya Simba Chigadziko
Nzvimbo A, Floor 2, Kuvaka 5, Chenxiang Road, Jiading Dunhu, Shanghai, China
Nhare: + 86-60296318 + 86-21-400-079-6006
Webhusaiti: www.chkbio.cn E-mail: admin@chkbio.com
Pashure: Model UF-150 Ultra-Inokurumidza Yechokwadi-nguva PCR Sisitimu
Zvadaro: CHK-16A Otomatiki Nucleic Acid Kubvisa System
Model UF-150 Ultra-Inokurumidza Yechokwadi-nguva PCR Sisitimu
MA-688 chaiyo-nguva PCR Sisitimu